Soo-saareyaasha Nidaamka Sawirka - Shiinaha Sawirka Nidaamka Sawirka & Alaab-qeybiyeyaasha
Tayo tayo sare leh ...
Loogu talagalay jilitaanka waxbarashada ilkaha ...
Ilkaha Dijital Te ...
Naqshadeynta xirfadeed ee Barashada Ilkaha Educati ...
Apixia Digital PSP Scanner USA Nidaamka Sawirka Dijital ah
QAABISKA MUUQAALKA MUUQAALKA FASIRKA
Sawir qaadiddu waa mid dhakhso badan oo fudud. Naqshadeynta naqshadeynta kor ku xusan ee caqli-galku waxay u adeegsaneysaa awoodda cuf isjiidadka si fudud loo isticmaalo loona buuxiyo. Waqti yar gudahood, shucaaca cad ee cad ayaa ka muuqda shaashadda kumbuyuutarka, diyaarna u ah in la daawado. Si fudud u geli saxanka soo socda ee soo-gaadhay markii aad diyaar tahay.
Dijital Ilkaha X-ray Sensor Vatech Ez Sensor
Nooca Chip: CMOS APS
Dhimista Dibadda (mm):
Cabbirka 1.0 (Ilmo / haweeney): 26.1 * 36.8
Cabbirka 1.5 (qaangaarka): 29.2 * 38.7
Cabbirka 1.0 (Ilmo / haweeney): 31.0 * 20.0
Qaybta raajada la qaadan karo AP-60P
Cutubkan raajada ilkaha la qaadan karo waa mashiinka soo noqnoqda oo sareeya. Jidhku waa yaryahay, miisaankiisu fududahay ku dhowaadna shucaac malaha. Waxay leedahay tayo sare oo muuqaal ah, keydinta la qaadan karo, keydso meel badan. Waxay isticmaashaa jaangooyooyin sarreeya iyo koronto caalami ah oo DC ah. Dhammaan qaybaha lagu rakibay guddiga dhexe ee PC-ga ayaa urursan. Naxdin, dejin, tuubooyin elektaroonig ah, dhammaantoodna waa faaruqin dahaadh ah, difaac ku-meel-gaadh ah oo been abuur ah.
Mashiinka X-ray Ilkaha ee darbiga ku dheggan JPS 60B
Adeegsiga tikniyoolajiyadda casriga ah ee caalamiga ah, qaab isku dhafan oo hufan, waxtarka sare, shucaac yar.
Isticmaalka microcomputer xakamaynta caqliga, ma aha oo kaliya soo-gaadhista kontoroolka fog, laakiin shaqada ka sii xoog badan ee alaarmiga danab hooseeya iyo ilaalinta danab sare.
Tikniyoolajiyadda 'micro focus', muuqaal aad u cad iyo ogaanshaha saxda ah.
Mashiinka Ilkaha Mashiinka X-Ray JPS 60G
1 Adeegso tignoolajiyada casriga ah ee ka dhexeysa labada dal
2 waxtarka sare iyo imaging cad, shucaaca soo daadanaya waa 1% kaliya heerka qaranka
3 Badhanka taabashada khafiifka ah, oo lagu xakameeyay microcomputer, kaliya riix hal badhan si aad u xulato cabbirka bandhigga, cibvebuebt si dhakhso leh oo sax ah
4 Ku horumarinta qolka nalka, sawirka hal daqiiqo, dhakhtarku wuxuu ku ogaan karaa si ku habboon ugu badnaan
Planmeca Promax 2D S3 Qaybta Panorama X-Ray OPG
Planmeca ProMax® waa nidaam sawir buuxa oo maxillofacial ah. Mabaadi'da naqshadeynta iyo hawlgalku waxay ku saleysan yihiin cilmi-baaristii ugu dambeysay ee sayniska, hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed iyo baahiyaha ugu baahida badan ee shucaaca casriga ah.
Digital 3D OPG Muuqaalka X-Ray ilkaha CBCT unug leh Cephalometric
· Algorithms gaar ah oo ku saabsan dib u dhiska sawirka HRPBR iyo farsamaynta WE image
· Ku hogaaminta tikniyoolajiyadda si caqli-gal ah soo saarista HD pano images si loo siiyo faahfaahin caafimaad oo dheeri ah iyo saxsanaanta cudurka sare
· Algorithm de-dhawaq caqli leh oo si weyn u hagaajinaya xallinta sawirka b soo saarista dhawaaqa sawirka iyo dhalanrog